Akụkọ - Ọmụmụ: :kọwanye agụụ maka nri na-emebi emebi na-eme ka ahịa IQF too
Ọmụmụ: Ọchịchọ na-eto eto maka nri na-emebi emebi na-eme ka ahịa IQF too
Nọvemba 26, 2018
KEYWORDS na-ada teknụzụ / mkpụrụ osisi friji / mkpụrụ osisi kpọnwụrụ akpọnwụ / mkpụrụ osisi friji na akwụkwọ nri / akwụkwọ nri friji / akwụkwọ nri friji / iche iche n'otu n'otu-ngwa ngwa oyi / ahịa
Ọganihu ahịa na-ebukwa site na mmụba na-eto eto na-achọ maka ngwaahịa nri na-emebi emebi, nri dị mma na nnukwu oriri nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-abụghị nke oge.
Ejiri ọnụahịa ngwa ngwa na-agbaze (IQF) zuru ụwa ọnụ na $ 14.77 na 2016, ma na-atụ anya iru $ 20.82 site na 2022, na CAGR nke 5.9% n'oge oge amụma, dị ka otu akụkọ nke MarketsandMarkets bipụtara, New York.
Ubara ojiji nke nkpuru osisi na akwukwo nri nke ifriizi na itinye IQF na nri ndi ozo bu abuo n’ime isi ihe n’eme ka otutu ndi ahia di na mpaghara dika North America na Europe.
Ọganihu ahịa na-ebukwa site na mmụba na-eto eto na-achọ maka ngwaahịa nri na-emebi emebi, nri dị mma na nnukwu oriri nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-abụghị nke oge. N'ihi ọchịchọ na-arịwanye elu maka ngwaahịa nri ndị dị otú ahụ, ndị na-emepụta na-elekwasị anya na ịtọ ntọala osisi IQF na ebe dị iche iche ma na-enweta ohere mgbe ohere dị elu maka ngwaahịa n'oge oge ezumike.
Agbanyeghị, nsogbu kachasị ndị nrụpụta chere ihu bụ nnukwu ego achọrọ na ọkwa mbụ nke nrụnye yana ụkpụrụ gọọmentị metụtara nsị nke ikuku gas sitere n'aka ndị na-emepụta nri.
Akụkụ cryogenic na-eto eto na ogo dị elu
A na-ejikarị friji friji eme ihe maka ngwaahịa IQF, dị ka nku ọkụkọ ọ bụla, peas oyi kpọnwụrụ ma ọ bụ nnukwu nri ndị ọzọ akpọkọtara ebe ọ dị mkpa iji chekwaa otu mkpụrụ.
Cryogenic friza belata okpomọkụ site na itinye ngwa ngwa nke nitrogen mmiri ma ọ bụ carbon dioxide n'ime ogige nke nwere ngwaahịa nri. Ka ọ dị ugbu a, teknụzụ cryogenic na-enye ọtụtụ elele, mana ọ chọrọ nnukwu mpịakọta nke friji. A na-ahọrọ ya ebe ohere nwere oke ma ọ bụ dịka ụzọ dị ala iji nweta ngwaahịa ọhụrụ na ahịa ngwa ngwa.
Increbawanye ọchịchọ maka mkpụrụ osisi & akwụkwọ nri IQF
Ọmịiko nke ndị na-azụ ahịa gbasara uru ahụike nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri emeela ka ọchịchọ maka mkpụrụ osisi ọhụrụ na oyi kpọnwụrụ na ahịa ụwa. Nkà na ụzụ ọhụrụ na-enye nhazi ngwa ngwa na ọnọdụ okpomọkụ dị mma, yana uru nchekwa ahụ.
N'ezie, ahịa ndị na-apụta dịka Russia, India na mba Latin America nwere nnukwu ohere maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri friji n'ihi ntakịrị nnabata.
Uto na ngwa igwe oyi na-eme ka ihe na-arịwanye elu maka ngwaahịa ndị oyi kpọnwụrụ dịka bred, mkpụrụ osisi, anụ na nri mmiri.
Marketszụ ahịa na-apụta bụ ókèala uto ọhụrụ
Na mpaghara Eshia Eshia, a na-atụ anya China na India ka ha bụrụ ahịa na-eto ngwa ngwa. Mpaghara nwere oke nke 21.1% nke ahia IQF zuru ụwa ọnụ maka mkpụrụ osisi abd. Uto a choro na ahia a bu ihe kpatara mmepe obodo ngwa ngwa, ime ka onu ogugu ndi mmadu na elu na ego ndi ahia. Incomebawanye ego ndị ahịa na-akpata emeela ka mmụba ndị ahịa na-eri na ngwaahịa nri oyi. Ihe ndị na-azụ ahịa na-achọ maka nri oyi na oyi jụrụ oyi na-aba ụba ma na-ewu ewu n'etiti ọgbọ na-eto eto na akụnụba na-abata.